Xigasho.net Lacag maku qaadan lahayd naas-nuujinta canuggaaga (sheeko Cajiib ah) - Xigasho.net
Lacag maku qaadan lahayd naas-nuujinta canuggaaga (sheeko Cajiib ah)
Markii ay uurka lahayd waxay ku fikireysay in gabadheeda si wanaagsan ay u nuujiso, balse umusha ka dib way ka xanaaqi jirtay: “Waxaa jirto marar kala duwan oo aan ka fikiray caqabadda arrintan oo xaqiiqdii aan la dhibtoonayay,” ayey tiri.
“Barnaamijkan waa mid ku wanaagsan in uu sii socdo – Waa dhiiragelin in la sii wado, halkii la quusan lahaa oo caruurta masaasad lala aadi lahaa”.
“Waxay ku siineysaa guul, ku sii socoshaha dhibaatada iyo waxay gacan kaa siineysaa in aad dib u billowdo naas-nuujinta.”
Waxay intaa ku dartay, in dumarka qaar ay la tacaalayaan dhibaatooyiinka ka soo wajaha shacabka marka ay naas nuujinayaan, waxaana jiro “Suuqgeyn marin habaabin baahday ah oo dheheysa ‘caanaha waxay u dhigmaan naas-nuujinta”.
“Waxaan ognahay in dumar badan ay doonayaan in canuggooda nuujiyaan, laakiin badankooda ma helaan macluumaadka iyo taageerada ficilka ah ee ay u baahan yihiin.”